Akilọ Nzukọ Ncheta Ozaki Shiro
Ngosi na akilọ Nzukọ Ncheta Ozaki
Can nwere ike weghachite ebe obibi ochie ebe ị biri maka afọ 10 gara aga ma lelee ya site na mpụga.Na mgbakwunye na ederede (mmeputakwa) na akwụkwọ, a na-egosipụta ihe ndị ọkacha mmasị.
2021 / 06 / 10 Ndị ọzọHydrangea nọ n’oge ntoju.
2021 / 04 / 20 Ndị ọzọE bipụtara "Ncheta Halllọ Nzukọ Ncheta" (Nke XNUMX)
2021 / 03 / 01 MkpakọrịtaEmeela ụlọ akwụkwọ gọọmentị ọhụrụ
2020 / 05 / 28 Ememe NchetaBanyere nnọchi nke ụfọdụ ihe ngosi
Shiro Ozaki, onye a na-ahụta na ọ bụ onye bụ isi na Magome Bunshimura, eweghachila ụlọ ebe ọ nọrọ afọ 1964 ruo mgbe ọ nwụrụ na 39 (Showa 10) wee jiri ya dị ka ebe ncheta.Shiro kwagara mpaghara Sanno na 1923 (Taisho 12) wee nweta ọnọdụ siri ike dị ka onye edemede a ma ama n'ihi ihe ọkụkụ nke "Life Theater".
Emepere Ozaki Shiro Memorial Hall na Mee 2008 iji webata ebe obibi mbụ nke Shiro (ụlọ ndị ọbịa, ọmụmụ ihe, ọbá akwụkwọ, ogige) iji gosipụta ịdị ndụ nke Magome Bunshi Village na ụmụ nke ga-abịa.Anyị na-atụ anya na ọtụtụ ndị ga-eji ụlọ ncheta a na ebe dị jụụ na ọtụtụ ahịhịa dị ka ntọala ọhụrụ maka ịgagharị Magome Bunshimura.
Panorama lee ọdịnaya site na iji igwefoto ogo 360.Nwere ike ịnweta ọhụụ gara Ozaki Shiro Memorial Hall.
Workslọ ọrụ na ụlọ ngosi ngosi nke rolọ Nzukọ Ncheta nke Shiro Ozaki, ihe ndị kachasị amasị Shiro, na ebe a na-ese foto nke ụlọ ncheta ahụ.
* You gaghị abanye n’ụlọ ahụ
Emechie nwa oge
TEL: 03-3772-0680 (talọ Ncheta Ota Ward Ryuko)